गरिबको मुक्ति गर्छौ भनेको गरिबलाई मार्छौं भनेको हो ? गरिब सबै मरे गरिबी उसै अन्त्य, सरकारहरूको चाहना यही हो र ? – Shirish News
समाज भोकालाई नुन खुवाउने, सरकार घाउमा नुन छर्किने
संविधानलाई सर्वोच्‍च कानुन किन मानिन्छ भने यो भन्दा माथि केही र कोही हुँदैन, यदि त्यो देशले आफूलाई विधिअनुसार चल्ने, जनभावनाको कदर गर्ने लोकतान्त्रिक राज्य दाबी गर्छ भने । ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ,’ संविधानमा यसमै थपिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, … खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।’
हाम्रो सभा निर्मित संविधानमा यस्ता हकहरूको घारी नै छ । संविधान र कानुन, पार्टीका घोषणा र सरकारका नीति कार्यक्रममा नेपाली नागरिकका लागि के-के हक छन् भनी खोज्नुभन्दा के चाहिँ हक छैनन् त भनेर खोज्नु सजिलो र संक्षिप्त हुन जान्छ ।
का‘नुन’मा शब्दमै सही ‘नुन’ पनि छ । तर, कानुन कार्यान्वयनकर्ताको व्यवहारमा न नुन छ, न केही सुन्छ । तर पख्नुस्, सरकारसित नुन पनि छ । खुवाउन हैन, पीडाको घाउमा छर्किदिन । खुलामञ्चलाई ‘भोकामुक्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान खासमा नुन वितरण अभियान हो । पोलेको घाउमा मल्हम लगाइदिनेलाई अभिभावक भनिन्थ्यो अब नुनचुक दलिदिने यस्ता ‘अभिभावक’लाई के भन्ने होला ?
संघीय भन्नुस् वा प्रादेशिक वा स्थानीय सरकार, गरिबको जनजीविकाका विषयमा कुनै सरकारलाई कुनै सरोकारै छैन । हाम्रो राज्यका अंगहरू आम नागरिकलाई कामै नलाग्ने गरी कोही नंग्न नृत्यमा, कोही मस्त निद्रामा त कोही रमितामा छन् । राज्यका अन्य अंगहरू र आयोगहरू पनि निष्क्रिय छन्, शिथिल छन् । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भन्ने शब्दलाई सरकारहरूले शव बनाइदिइसकेका छन् । शासकका पदीय कुर्सीमा सधैँ रहनुपर्ने यी शब्द अब केवल शब्दकोशमै मात्र छन् ।
शासकहरू न भोकाहरूको आर्तनाद सुन्छन्, न चाउरिएका पेट देख्छन्, न ग्याट्रिकको ढ्याउव सुँघ्छन् । पीडामा शासकहरू कतिसम्म कठोर र निदर्य हुन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न ‘खुलामञ्चमा नखुवाउनू, होटेलमा खुवाउनू’ भन्ने सनक सम्झे पुग्छ ।
झन्नै वर्ष दिन पुग्न लागेको कोभिड-१९ को महामारीका कारण गरिबको भान्सा रित्तो र चुलो चिसो हुन थालेको कति भयो कति ! ठालू शासक-प्रशासकहरूलाई जस्तो गरिबलाई यतै कमिसन, उतै करप्सन, यतै दलाली, उतै भत्ता, यतै नाफा, उतै लाभ, यतै ब्यालेन्स, उतै गिफ्ट हुँदैन । धनीमानीहरूलाई आफ्नो बैंक खातामा दसैँ पेस्की आएको हो कि घूस आएको हो वा घूसको बाह्रौँ किस्ता आएको हो वा घूसको अग्रिम पेस्की, हिसाब गरिसाध्यै हुन्न ।
‘परिस्थितिको वस्तुगत एवं वैज्ञानिक संश्लेषण र विश्लेषण’ गर्न सिपालु माक्र्सवादी कमरेडहरूले खान नपाए मान्छे मर्छ भन्ने विज्ञानलाई समेत प्रतिक्रान्तिको पुँजीवादी पूर्वाभास देखे कि कसो हो ?
उनीहरूलाई करोड पनि कत्ति होइन । तर, गरिबका लागि एक सुका कमाइ छैन, बचत छैन, दिनमा दुई घण्टा हिँडेर एक छाक खान पाएर पेट उकास्न पाउनु नै लाख छ । जिन्दगीकै ठूलो सपना भनेको खुलामञ्च पुगी खानकी भेटाउनु । जब कि कुनै बेला यस्ता दिन थिए, यही जमात खुलामञ्च पुगी यिनै शासकका भाषण सुनेर मुग्ध हुन्थे । ती मुग्ध थिए, अब क्रुद्ध छन् । आँखा नझिम्याइबक्सियोस् ।
शासक तिनै गरिबको कर खाएर पाँच तारे होटेलमा शयन गरिरहँदा गरिबहरू खुला आकाशमुनि पाँच लाख तारा गन्दै बस्नुपर्ने यो समाजवादउन्मुख देशमा कम्युनिस्टको दुई तिहाइ बलियो सरकार छ । कम्युनिस्टहरू भन्छन्, हामी सर्वहारा, हाम्रो वर्गीय पक्षधरता जहिल्यै निर्धा र निमुखाप्रति । हामी गरिबका साथी । हामी भोकानांगा, मजदूर, किसानका मुक्तिदाता ।
शासक यसरी फेरिए कि यिनले निमुखाहरूको खाने मुख हुन्छ भन्ने नै बिर्सिए । गरिबको पेट हुन्छ भन्ने नै भुले । ‘परिस्थितिको वस्तुगत एवं वैज्ञानिक संश्लेषण र विश्लेषण’ गर्न सिपालु माक्र्सवादी कमरेडहरूले खान नपाए मान्छे मर्छ भन्ने विज्ञानलाई समेत प्रतिक्रान्तिको पुँजीवादी पूर्वाभास देखे कि कसो हो ? खुलामञ्चको खानकीलाई खुमलटारको स्वादिलो सितन भन्ठाने कि कमरेडहरूका अनेकन् टारमा पाक्ने चौरासी व्यञ्जन भन्ठाने ? खुलामञ्चमा निःशुल्क भोजन गर्न लङ मार्चमा यात्रारत उनीहरू मार्सीभोजमा हिँडेका सर्वहारा-सर्वहारी त पक्कै होइनन् । आकाशका तारा झारिदिने गफ मात्र खुवाउन हुने खुलामञ्चबाट गरिबका बंगारै दुख्ने गरी मासुभातै खुवाउनु खुवाउनेकै दोष हो, शासकलाई लाज हुने गरी यसरी खुवाउनुभन्दा सोल्टीतिर लगेर पनि त खुवाउन सकिन्थ्यो !
आफूले खुवाउनु त कता कता, अरुले खुवाएको पनि देखी नसहने शासकहरूले गरिबीबाट मुक्ति हैन, गरिबको मुक्ति खोजेजस्तो छ । हुन त भोकाएकालाई रोटी दिए ऊ खानैमा भुल्छ र क्रान्तिमा हिँड्दैन । त्यसैले गरिबलाई ‘तँ किन खान नपाउने भइस्’ भनेर अर्ति दिए, ऊ बुरुक्क उचालिएर क्रान्तिमा हिँड्छ । अब यो सरकार पनि रोटी नदिएर पुँजीवादी अभियानमा नलागेको हुनुपर्छ । गरिबलाई माछा दिनुभन्दा जालै दिने भनेर जाली योजना बुन्दै होला, सायद सरकार ।
अभिभावक त्यसलाई भनिन्छ, जसले घर-परिवारको संरक्षण गर्छ, हरेक कुराको प्रबन्ध मिलाउँछ । सन्तानहरू सबैको कमाइ लिन्छ भने सन्तानहरूका आवश्यकताको प्रबन्ध मिलाउनु उसको न्यूनतम कर्तव्य हो । बराबर माया र महत्व अनि संरक्षण र सम्मान पाउनु हर सन्तानको अधिकार हो । अभिभावक अन्यायी र अविवेकी भयो भने परिवारमा विद्रोह र भाँडभैलो त हुन्छ नै । यस्तो अव्यवस्थाको जिम्मेवारी फेरि सन्तानको हैन, सन्तानको कमाइ खाने तर काम फिटिक्कै गतिलो नगर्ने अभिभावककै हुन्छ ।
अभिभावकले विवेक, न्याय र कर्तव्य पालना राम्ररी गर्नुपर्छ । हैन भने सम्हाल्न सकिनँ भनेर सर्लक्क छोड्नुपर्छ । यहाँ निर्विकल्प र स्थायी भन्ने कुनै केही छैन । कोभिड उपचार महँगो भएर गरिबले आत्महत्या गरेका अखर आइरहेका छन् । गरिबको मुक्ति गर्छौ भनेको गरिबलाई मार्छौं भनेको हो ? गरिब सबै मरे गरिबी उसै अन्त्य, सरकारहरूको चाहना यही हो र ?– इकागजको सम्पादकीय